DHEGEYSO: Sweden oo durba ka ”FAA’IIDDEY” handaraab la’aantii (Tirakoob) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DHEGEYSO: Sweden oo durba ka ”FAA’IIDDEY” handaraab la’aantii (Tirakoob)
DHEGEYSO: Sweden oo durba ka ”FAA’IIDDEY” handaraab la’aantii (Tirakoob)
(Stockholm) 17 Juun 2020 – Hoos u dhaca dhaqaalaha Sweden ayaa la sheegayaa inuu ka roon yahay sidii la moodayey markii hore, sida uu sheegayo Machadka Qaran ee Daraasaadka Dhaqaalaha.
Sida uu qabo Machadka KI, GDP-ga Sweden ayaa hoos u dhacaysa ilaa 5.6%, taasoo dhaanta dalal badan oo Yurub ah iyo saadaashii hore ee bishii Abriil oo ahayd 7%.
Waxaa sababta ugu wayn lagu sheegay Sweden oo aan gelin handaraab buuxa sida dalalka kale, sida uu faalleeyaha dhaqaale ee KI, Kristian Åström.
– Farqiga u dhexeeya Sweden iyo dalalka kale ee Yurub haatan wuu ka ballaaran yahay intii markii hore la saadinayey. Markii hore waxaa la xisaabay inuu yahay 1%, haatan se wuu ka wayn yahay, ayuu yiri Kristian Åström.
Halkan hoose ka dhegeyso warbixin uu ka diyaariyey Maxamed Xaaji oo ka tirsan Radio Sweden.
Previous articleEPL oo lasoo noqonaya HIILLO cusub & safafka laga yaabo ee Man City vs Arsenal
Next article”Kalsoonidii ayaa naga luntay!” – Soomaalida oo ka NAXSAN arrin uu ku kacay waayeel falfal xun & warar kale oo Soomaalida ku saabsan (Dhegeyso)